कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल — Sanchar Kendra
१जसपाबारे निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय
२काठमाडौँ उपत्यकामा लागु हुने भयो यस्तो नयाँ नियम, आजै जारी भयो सूचना
३ओली सरकारलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिए यस्तो काउन्टर
४संवैधानिक परिषद्‌को नयाँ सिफारिसविरुद्ध सर्वोचमा रिट
५थप २४०७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४६ को मृत्यु
६काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा
७फेरि एक साता लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा, अब यी क्षेत्रहरु खोल्न दिइने
८कोरोना खोप लगाएपछि शरीरमा टाँसिन थाले सिक्का र फलामका सामान, डाक्टरै चकित
९लुम्बिनीमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप
१०फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
११नेपालमा मनसुन प्रवेशसँगै बाढीपहिरोको जोखिम उच्च, सतर्कता अपनाउन आग्रह
१२काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि १५ दिन निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
काठमाडाैं । भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिङले दुई दिन अगाडि विश्व प्रसिद्ध टेलिभिजन च्यानल सीएनएनमा एक लाइभ अन्तर्वार्ता दिए । जुन अन्तर्वार्ताबारे अहिले विश्वभरि चर्चा भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले तेस्रो विश्वका साना र गरीब मुलुकको बारेमा सकारात्मक समाचार एकदमै कम र नकारात्मक समाचार बढी सम्प्रेषण गर्दछन् । सीएनएनले अन्तर्वार्ता लिएको विषयलाई भुटानका प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आश्चर्यकै रूपमा लिएका रहेछन् । उनले अन्तर्वार्ताको शुरूमा भने, ‘मलाई आश्चर्य लागेको छ, तपाईंले भुटानलाई कसरी भेटाउनुभयो, सामान्यतः हामी त्यति सुनिंदैनौं तर म वास्तवमा नै खुशी छु किनकि तपाईंले हामीलाई रिचआउट गर्नुभयो ।’
हुन पनि भुटानमा अहिलेसम्म कोरोनाको कारणले एक जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । बुधबारसम्म भुटानमा १ हजार २४१ जना संक्रमित भएका छन् भने सक्रिय केस १५२ मात्र रहेको छ । सन् २०२० को मार्च महीनामा नै भुटानमा कोरोनाको पहिलो केस देखिएको थियो ।
उसो त चीनमा कोरोना देखिनासाथ नै भुटानले रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । उसले त्यसलगत्तै विदेशी पर्यटकहरूलाई भुटान प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । यति मात्र होइन, देशभित्र प्रवेश गर्ने आफ्ना नागरिक र विदेशीलाई १६ दिने निकै कडा अनिवार्य क्वारेन्टाइन गरिएको थियो ।
कोरोनाको परीक्षण र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राजपरिवार समेत फिल्डमै खटिएको थियो, लामो समयसम्म । सरकारी संरचनाले काम गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा उच्च तहबाट नै बारम्बार स्थलगत निरीक्षण समेत भएको थियो। कोरोना नियन्त्रणमा मात्र होइन, खोप कार्यक्रममा समेत भुटानले सफलता प्राप्त गरेको छ ।
१६ दिनको अवधिमा भुटानले ९३ प्रतिशत प्रौढलाई पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको छ भने दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रमको लागि भारत लगायत अन्य मुलुकसँग कुराकानी गरिरहेको छ । अबको केही हप्तामा नै दोस्रो चरणको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएकाले भारतबाट सम्भव नभए अन्य मुलुकबाट खोप ल्याउने तयारी भुटान सरकारले गरेको छ जुन जानकारी प्रधानमन्त्री छिरिङले सीएनएन अन्तर्वार्ता मार्फत पनि जानकारी गराएका छन् ।
यति मात्र होइन, आर्थिक र अन्य स्रोत सीमित भएको भुटानले महामारीविरुद्ध लडिरहेको भारतलाई केही अक्सिजन समेत सहयोग गरेको छ । भुटानका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
ओली सरकारलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिए यस्तो काउन्टर
नेपालमा मनसुन प्रवेशसँगै बाढीपहिरोको जोखिम उच्च, सतर्कता अपनाउन आग्रह
पहिरोले बिहानैदखि सिद्धार्थ राजमार्ग अवरूद्ध
गण्डकी प्रदेशमा को–को लिँदै छन् मन्त्रीको सपथ ? नामसहित
मधु अधिकारीलाई मन्त्री बनाउने माओवादीको निर्णय
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्नामा
वनभोज खान गएको सरकारी कार दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु